* Jir dhis fara badan ama jir dhis aan la qorsheysannin.
* Xanaaqa iyo kacsanaanta hormoonada qaar waxay ridaa sonkorta e.g: dad ayay sonkorta ka dhacdaa markii ay dagaallamaan.
* Daawada sokorta oo xad dhaaf aad u qaadatid - (waa haddii aad Sonkor qabtid)
* Cuntooyinka la seego ama la daahiyo ama qofka oo cunno xumi qabo.
* War-wareer, lulasho, isku dhex yaac, daciiftinnimo ama daallanaan
* Dabci beddel ama iska xanaaqaysid ama aan si kala cad u fekereynin
* Aadan awoodin inaad hadasho
* Aragga caad kaa fuulo
* Aad dareento wadnaha oo si xawli ah kuu garaacaya
* Aad dhinacyada afka iyo faruuryaha ka dareento kabaabyo
* Maduxu ku xanuuno
* ½ koob ama 120 millilitir oo casiir ah, Maahan cabitaannada sonkorta aan lahayn ama kalooriska aan lahayn.
* 3 ama 4 kaniini oo gulukoos ah
* 1 qaaddo ama 15 millilitir oo sonkor ah
* 1 koob ama 240 millilitir oo caano ahSonkorta dhiiggaaga ku hubi 15 daqiiqadood. Haddii sonkorta dhiiggaagu ay weli ka sii yar tahay 70 ama haddii aadan ka soo raynin, cun ama cab qaadasho kale oo cuntadii ama cabitaankii la soo sheegay.
* Haddii ay kuu tahay waqtigii aad cuntada cuni lahayd, cun cuntadaadii caadiga ahayd.
* Haddii cuntadaada xigta ay ka badan tahay saacad, cunto fudud sii cun. Isku day sandiwij barkiis iyo 1 koob ama 240 millilitir oo caano ah.
* Raac qorshaha cunto cunidda. Cun cuntooyin iyo cunno fudud isla waqti maalintiiba. Ha seegin hana ka daahin cuntooyinka.
* Hubi oo diiwaan geli heerarka gulukoostaada. Haddii ay sonkortaadu hoos u dhacdo in ka badan 2 goor toddobaadkiiba, dhakhtarkaaga la xiriir. Waxaa laga yaabaa in isbeddello lagu sameeyo cuntadaada, daawada ama sameynta jir dhiska.
* Daawadaada sonkorowga u qaado sidii lagu faray. Ha qaadannin daawo sonkorow oo dheeraad ah iyadoo uusan dhakhtarkaagu kugula talinnin.
* Si joogto ah jir dhis u samee.
* Waqti kasta ha kuu taallo cuntooyin fudud sida shukulaato, malmalaaddo, iyo casiir.
* Dadka kale ee kula shaqeeya ama kula nool u sheeg inaad qabtid cillada dhicista sokorta.Cilladaan waxaa badanaa lagu qaldaa, astaamaha la dareemo markuu qofka xanaaqo taasoo ay isku astaamo dhaw yihiin, Fadlan akhriso qoraal ku saabsan xanaaqa xad dhaafka ah iyo siduu jirka u saameeyo: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=6563.0